भीमेश्वरलाई राष्ट्रको कालो बोको
नेपाली कांग्रेस र नेकपालाई धर्मनिरपेक्ष पार्टी भनेर भन्ने कि नभन्ने ? धर्मनिरपेक्ष भनेर र बनेर यिनीहरु धार्मिक क्रियाकलापमा लागिरहेकै छन्, धार्मिक अनुष्ठान र तन्त्रसम्ममा यिनको विश्वास रहेका अनेक घटनाक्रम पनि देखिएका छन् । फेरि हिन्दु राष्ट्रलाई यिनले धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्नुपर्ने र यसका लागि जनतालाई सोध्नुसम्म नपर्ने कारण के होला ? हुन त संविधान निर्माण गर्दा सुझाव संकलन गरिएको थियो, ९० प्रतिशत जनताले नेपाल हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थिए, जनताको सुझाव लत्याउने र धार्मिक स्वतन्त्रता लेखेर फर्केका सभासदहरु भोलिपल्ट संविधान जारी हुँदा धर्मनिरपेक्ष सुनेर तैं चूप मै चूप किन बसे, रहस्यमय छ ।
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नेहरुले भैंसी पूजन गरे, अनेक गुरुहरुको चरणदास पनि बनेको देखियो । पूजाआजा र साइत र ब्रतमा पनि विशेष चासो राख्छन् । ईश्वरको नाममा सपथ नखानेहरु ईश्वरको अदृश्य दण्डबाट बच्नका लागि धार्मिक विधि र तान्त्रिक तरिका अपनाउन थालेका छन् । ठूला दलभित्रका ठूला नेताहरुको र सत्तासीन शक्तिशाली पदासीनहरुको यो चरित्र देख्दा लाग्छ– यिनले धर्मनिरपेक्ष संविधान त जारी गर्न सफल भए, विदेशी मालिकलाई रिझाए । तर आत्माभित्रको विश्वासलाई निरपेक्ष बनाउन सकेनन् र ईश्वरप्रति आस्था राख्न थालेका छन् ।
दोलखा भीमेश्वरलाई पसिना आउँदा जनमत संग्रह भयो, बहुदल आयो, जनयुद्ध भयो र जनआन्दोलन पनि भयो । नेपालमा सत्ता र व्यवस्था परिवर्तन भयो । गतहप्ता फेरि भीमेश्वरलाई पसिना आएको छ । भीमश्वरलाई आएको पसिनाले सिंहदरवार र शितल निवासमा राज गर्नेको मनमा छटपटी भयो, तिनीहरुभित्र डाहा भयो र भएको सत्ता गुम्ला भन्ने डरले उनीहरु असिनपसिन हुनपुगे । आत्तिएका सत्तासीनहरुको सातो गएको थियो ।
यसैको प्रतिफल हो, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा गृहलाई आदेश दिइन् र गृह मन्त्रालयले राज्य ढुकुटी निकासा गरेर कालोबोको, भेटीसहितको क्षमापूजा पठायो, दोलखा भीमेश्वरको मन्दिरमा क्षमापूजा सम्पन्न गरिएको छ । यो पूजामा राष्ट्रपतिको तर्फबाट व्यक्तिगत पूजासामग्री र भेटी पनि पठाइएको थियो । भीमेश्वरको प्रसाद, पसिना पुछेको कपास प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलाई दिइएको थियो । उनीहरुले प्रसाद ग्रहण गरेका थिए ।
गतहप्ता मंगलवार क्षमा पूजा गरिएपछि भीमेश्वरको पसिना सुकेको समाचार आएको छ । क्षमापूजामा राज्यका तर्फबाट जिल्लाधिकारी भीमकान्त शर्माको टोली, गुठियार, पुजारी र जनप्रतिनिधिहरुको संयुक्त शक्ति नै भीमेश्वर पुगेको थियो । उनीहरुले भक्तिपूर्ण रुपमा पूजा गरेका थिए ।
भीमेश्वर गुठियारका अनुसार सरकारले पठाएका दुई काला बोका र स्थानीयवासीका तर्फबाट दुई गरी चार वटा बोकाको बली दिएर ५ घण्टा लामो क्षमापूजा गरिएको थियो । क्षमापूजामा ११ आवर्ती, रुद्री पाठ तथा राष्ट्रमा कुनै अशुभ घटना नहोस् भन्दै महापूजा गरिएको थियो । भीमेश्वरको मूर्तिमा पसिना आउनुलाई राष्ट्रमा ठूलो अनिष्ट हुनसक्ने संकेतका रुपमा लिने गरिएको छ । भगवानको डर आखिर कम्युनिष्टलाई पनि रहेछ । यसकारण त यिनीहरुको ईश्वर छैन भन्ने मान्यता खोक्रो हो ।